Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Walter Miller | Michael Wright: Taorian'ny fiara nateraky ny fiara, nodimandry ny namana iray namoy ny ainy ho toy ny zanakalahin'ilay sakaizany - Fikarohana momba ny vatana vaovao
From: Ireo ankizy izay mahatsiaro ny fiainana taloha, nataon'i Ian Stevenson
Nodimandry i Walter Miller tao anaty fiara taorian'ny dihy
Walter Miller dia mpanakanto mpankafy izay nanomboka niaraka tamin'ny tovovavy iray antsoina hoe Catherine tany amin'ny lisea. Walter dia nanao sary ho an'i Catherine. Nipetraka tao amin'ny tanàna kely iray any Texas izy ireo. Rehefa niaraka nandritra ny 3 taona izy ireo dia nikasa ny hanao fofom-bady ary avy eo hanambady.
Indray hariva dia nandeha nandihy i Walter sy ny namany Henry Sullivan izay natao tao amin'ny tanàna mifanila aminy. Nandeha nody avy tany amin'ny dihy i Walter nefa toa natory tao anaty kodiarana izy. Nihazakazaka teny ivelan'ny arabe ny fiarany ary nianjera. Walter Miller dia maty teo noho eo noho ny hatony tapaka. Nandositra i Henry Sullivan nefa tsy naratra mafy. Ny lozam-pifamoivoizana nahafatesan'i Walter dia nitranga tamin'ny fahavaratry ny 1967, raha mbola tanora tao amin'ny lise izy.
Na dia nampalahelo an'i Walter tamin'ny fahafatesan'i Walter, herintaona taty aoriana, tamin'ny volana 1968 dia nanambady namana iray hafa, Frederick Wright no anarany.
Fampandrenesana momba ny fanambadiana ianao ao amin'ny vatana vaovao: Walter dia manondro fa hiverina any amin'i Catherine izy
Fotoana fohy taorian'ny fanambadiany dia nanonofy an'i Walter i Catherine, izay nilaza fa tsy maty izy ary hiverina aminy ary hanao sary ho azy indray. Catherine dia nanazava ny nofy, izay midika fa hoe hiverina indray i Walter. Noheveriny fa mety ho teraka indray i Walter noho ny anabavin'i Walter Carole Miller, izay bevohoka tamin'izany fotoana izany. Tsy tonga tany amin'i Catherine izy fa hiverina indray i Walter toy ny zanany.
Catherine sy Frederik vadiny dia nanana zanakavavy voalohany. Tao amin'ny 1975, nanan-janaka lahy izy ireo ary nantsoiny hoe Michael.
Fitiavana ny fahatsiarovana ny fiainana: Micheal Wright dia mamaritra ny Fahafatesany ho an'i Walter Miller
Rehefa feno telo taona i Michael dia naheno ny reniny tamin'ny filazana ny rahavavin'i Walter Carole Miller.
Taty aoriana i Michael dia nanome kaonty amin'ny antsipiriany momba ny lozam-pifamoivoizana nataon'i Walter. Hoy izy: “Tao anaty fiara izaho sy ny namako iray, ary nivily teny amoron-dalana ilay fiara ary nivadika hatrany. Nisokatra ny varavarana, ary nianjera aho ary novonoina. ”
Fijery avy any an-danitra: ny vatan'i Walter dia nafindra teny ambonin'ny tetezana
Michael koa dia niteny fa tapaka ny fitaratra tao anaty fiara ary nentina teny amin'ny tetezana iray taorian'ny loza. Nomeny ihany koa ny tanàna izay nandraisan'ny dihy ny fiverenany avy eny amin'ny làlambe.
Nanampy i Michael fa nijanona tao amin'ny trano fialan-tsasatra izy sy ny namany teo an-tokotany talohan'ny loza nahatsiravina azy. Nilaza izy fa i Sullivan no anaran'ilay sakaizany ary nitanisa marina ny anaran'i Henry Sullivan izy. Nanome fanazavana marina momba ny tranon'i Walter sy ny tranon'i Henry Sullivan koa i Michael.
Fantatr'i Catherine fa marina ireo fanambarana ireo noho ny lozam-pampahalalam-baovao iray momba ny loza nahazoan'i Walter, izay nahitana sarin'ny fiara efa simba. Ny fiara mpamonjy voina izay nitondra ny vatan'i Walter dia nandalo tamina tetezana teo amin'ny lalana mankany amin'ny morgue.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nalain'i Walter Miller tamin'ny ankizivavy malalany Catherine tamin'ny alàlan'ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, saingy naverina tany amin'i Michael zanany lahy izy.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Nahafantatra i Michael fa ny vatan'i Walter dia nentina tamin'ny tetezana iray taorian'ny loza. Rehefa nitranga izany taorian'ny nahafatesan'i Walter, dia toa nanatri-maso an'io toe-javatra io tamin'ny fanahin'ny fanahy ny fanahiny. Ankoatra izany, ny ain'i Walter | Nandefa fanambarana nanambara tamin'i Catherine i Michael, ary nilaza izy fa hiverina amin'ny vadiny indray izy.